शास्त्रले भन्छ- जीवनमा भुलेर पनि अपुरो नराख्नुस् यी ५ काम - Kohalpur Trends
The publish शास्त्रले भन्छ- जीवनमा भुलेर पनि अपुरो नराख्नुस् यी ५ काम appeared first on The Buddha Khabar.
Previous Previous post: “नौ”लाख बती बालेको फोटोलाई २ हात जोडी छुनुहोस र ॐ ॐ लेखी सेयर गर्नुहोस।सारा दुख पाप काटिनेछ र लक्ष्मी प्राप्ति हुनेछ।ॐ ॐ ॐ !!!
Next Next post: पाल्पामा टिपर दुर्घटना हुँदा चालकको मृत्यु
११ मंसिर, काठमाडौं । महोत्तरीको बर्दिबासमा बालिका हत्याको विरोधमा भएको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले गोली चलाएको विषयमा छानविन गर्न गृह मन्त्रालयले समिति बनाएको छ । मन्त्रालयका…
सर्वोच्चको आदेश : सुधीर बस्नेतलाई तत्काल पक्राउ नगर्नू
११ मंसिर, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बैंकिङ कसूरको आरोप लागेका व्यवसायी सुधीर बस्नेतलाई पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । बैंकबाट ऋण लिँदा कर्जा…
पुरुषलाई थाहै नहुने महिलाका यी ७ रहस्य !
एजेन्सी, पुरुष र महिला भिन्न भएर पनि एकअर्काका परिपूरक हुन् । एकको अस्तित्वबिना अर्को सम्भव छैन । महिलालाई पुरुष एवं पुरुषलाई महिलाको आवश्यकता पर्छ । अधिकाँश पुरुषलाई…